Best Disinfection Robot, AD10 Ọ DỊGHỊ onye fesa Disinfection Robot na Nchaji onwe maka ụlọ ọgwụ ụlọ akụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Market ụzọ ụgbọ oloko Manufacturer na Factory | Judphone
Robot disinfection, AD10 Ọ DỊGHỊ onye fesa Robot disinfection na chaja nkeonwe maka ụzọ ụgbọ oloko ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ akwụkwọ ụlọ ọgwụ.
●> 5m na dayameta nke mkpuchi ịgba, arụmọrụ disinfection dị elu: 26m³ n'ime nkeji 4-5
●Micron-sized abụọ atomisers maka obere urughuru alụlụ disinfection, ike igbu mmetụta na coronavirus
●Mgbanwe ọgụgụ isi maka disinfection plasma na-aga n'ihu mgbe njedebe njedebe
●Ndokwa nke ọma & zere ihe mgbochi amamihe
A na-emezi ihe ngwọta hydrogen peroxide 7.5% wee fesa ya site na nozzle pụrụ iche n'okpuru nrụgide anụ ahụ, ka ọ wee mepụta ihe na-eme ka sterilization submicron na ọnọdụ igwe ojii kpọrọ nkụ, nke nwere ike ịgbasa n'ime ikuku. Na hydrogen peroxide dị na steeti a na-eme ngwa ngwa na nje bacteria na microorganisms ndị ọzọ na-akpata ọrịa na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike n'otu oge na-achọpụta ezigbo disinfection na ikuku na ihe elu.
1.Multi-mpaghara map nwere ike ịtọ, na dị iche iche disinfection Mpaghara nwere ike Switched enweghị mmadụ ọnụnọ. Njikwa PAD, njikwa ikike ọkwa dị iche iche, arụ ọrụ akpaka nke mkpochapụ, igodo laser, igodo anya, zere ihe mgbochi kwụụrụ onwe ya.
2.Ikike ngwọta bụ 10L. Ọ nwere ike ikpochapụ oghere nke 1500m³ n'otu oge. Ebe ịgba ahụ buru ibu, dayameta mkpuchi ịgba bụ ≥5m, na dayameta nke irighiri ihe bụ 1-10μm. Mgbe emechara disinfection, ọ nweghị ntụpọ mmiri na ala, na hydrogen peroxide na-agbasasị n'elu.
3.The disinfection arụmọrụ dị elu, 5-10ml ngwọta dị mkpa maka onye ọ bụla m³, na spraying arụmọrụ bụ 55ml / min. Dịka ọmụmaatụ, ọnụ ụlọ nke 26m³ nwere ike sachapụ ihe dịka nkeji 4-5.
Ụlọ ọgwụ (ọnụ ụlọ ọrụ, ụlọ nyocha, ngalaba nrụgide na-adịghị mma, ụlọ na-agbanwe ọgwụ, wdg);
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Ọrịa (Ngalaba Nchịkwa Ọrịa, Ngalaba Na-ahụ Maka Mgbochi Ezubere, Ngalaba Nleba Ahụ, Ngalaba Na-ahụ Maka Nchekwa, wdg);
Ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ, ụlọ ọrụ nri (mmepụta ebe dị ọcha);
Ụgbọ njem ụgbọ oloko (ụgbọ ala metro, ụgbọ okporo ígwè dị elu, wdg);
Ụlọ akwụkwọ (ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, wdg)
fesa ụmụ irighiri ihe 1-10μm
fesa anya 3m
Ịgba ọsọ ọsọ 35ml/min
Ibu 14kg (Arọ nke disinfection igwe)
Nha 353 * 200 * 372mm (Otu nha dị ka onye nnabata kọmputa)
Ịnye ọkụ Batrị lithium na AC220V isi ọkọnọ
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ -10 ℃ ~ 40 ℃
Nchaji Ọkọlọtọ chaja
Ihe na-egbu egbu 7.5% H2O2 ngwọta
Nhazi Ihe mmetụta ịdị arọ arụnyere n'ime ya iji chọpụta ịdị arọ nke ọgwụ nje.
Oge sterilization 20-60 nkeji na-aga n'ihu disinfection mgbe ịgbasa (Oge dịgasị iche iche dị iche iche gburugburu)
Oge ikuku ikuku Nkeji 15
Olu disinfection ≤100m³
Mmetụta disinfection Mgbe a kpochapụrụ ya, a na-emebi hydrogen peroxide n'ime H2 na O2, na-enweghị ihe fọdụrụnụ, mmetọ nke abụọ na ihe ndị dị ize ndụ.
Ụdị sterilization Ọ nwere ike mebie ma gbuo staphylococcus albus, nje bacteria eke ikuku, escherichia coli, staphylococcus aureus, na bacillus subtilis var.
Ịrụ ọrụ disinfection Disinfection nke ikuku nke ubi simulated na ọnụego disinfection> 99.9%
Disinfection nke elu nke ubi simulated na ọnụego disinfection> 99.9%
Sistemụ Ejiri ya na ihuenyo mmetụ aka iji ghọta njikwa disinfection, igwe nwere ike nyochaa ịdị arọ nke disinfection ozugbo, dozie ihe ndị chọrọ ọgwụ nje wee jiri otu bọtịnụ bido ọgwụ nje.
Nke gara aga: Ihe nzacha PTFE
Osote: Igwe na-efe efe nke UV-Plasma akpaaka
Ejikọtara ya Ngwaahịa